Joshua Kimmich Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Home Ulo oru Europe Joshua Kimmich Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha; "Mr Versatile". Joshua Joshuamich Child Story plus the Untruth Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ ihe na-emeghị ka ọ mara banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ya na-mara mma ọgụgụ isi. Otú ọ dị, ọ bụ nanị aka ole na ole maara banyere Jọshụa Kimmich's Bio nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Joshua Kimmich Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Ndụ mbido
Joshua Walter Kimmich mụrụ na 8th ụbọchị nke February 1995 na Rottweil, Germany. A mụrụ ya nne ya, Anja Kimmich na nna, Berthold Kimmich.
A mụrụ Jọshụa Kimmich ihere ma dị jụụ, ma n'aka nke ọzọ, ọ nwere ike ịdị na-agbasi ike ma dị ike dị ka ndị mụrụ ya hụrụ. O doro anya, ọ malitere ịmalite mgbe ọ bụ nwata. Kimmich toro na obere obodo nta nke Bösingen, nke dị n'agbata obodo Black Forest na Baden-Württemberg isi obodo Stuttgart. Bösingen bụ obodo nke ime obodo ebe ọ na-enweghị ihe efu na-ejedebe maka obere ụmụaka mgbe enwere football na ụkwụ ọ bụla nwatakịrị. Na enweghi ihe karịrị 1,700 bi na ụmụ nwoke ndị ọzọ n'ime obodo, football ghọrọ ihe omume ntụrụndụ maka Kimmich.
N'oge ahụ, Kimmich ga-eme n'ihu ụlọ ubi na azụ ụlọ ya. Ka ọ na-eme nke ahụ, ọ ga-agbaji bọmbụ na-abaghị uru na ya. N'ụzọ dị ịtụnanya, ndị mụrụ ya adịghị echegbu onwe ha banyere nwa ha na-ebibi ihe kama nke ahụ, ha wepụtara ihe ngwọta ọzọ mgbe ha na-anọchi nwa ọ bụla na ndị enyi ya na-agbajikwa iko ọ bụla. Dịka Kimmich si kwuo ya;
"Otu ụbọchị, abọtara m n'ụlọ ma chọpụta ihe mgbaru ọsọ bọl abụọ n'èzí,"
Kimmich gwara ya PlayerStribune.
'Ngwá egwuregwu nke ụlọ ebe ahụ adịghịzi mkpa ha, ndị mụrụ m ewepụtakwara ha n'aka ndị otu. Papa m na-ezo aka na atụmatụ nke ala a na-ejighị na-agafe n'okporo ámá ma gwa m na ndị enyi m; ụmụ okoro, gafee ebe ahụ wee hụ bọl football gị. '
Joshua Kimmich, na ndị enyi ya nọ n'ogige ọhụrụ ahụ mepere isi ọhụrụ na ndụ ya. Nke a mere ka ọchịchọ ya nke ịghọ ndị na-agba ụkwụ bụ nanị ihe na-agafe agafe. Na mgbe ahụ, Kimmich ga-ele anya iji ṅomie ụfọdụ n'ime arụsị ya ndị mbụ ya n'etiti ha gụnyere; Zidine Zidane, Bastian Schweinsteiger na Tomas Rosicky. Ndị a bụ nanị mmadụ atọ n'ime aha ya na azụ uwe elu. Ileba anya na ọrụ ndị a na-efe arụsị ndị a nwere ike inyere onye na-atụ aro ọrụ Kimmich aka ịchọta n'ọhịa.
Joshua Kimmich Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Malite Ọrụ
Mmasị nke Kimmich maka football mere ka o debanye aha ya na akwukwo ndi otu ndi ntorobia obodo, onye nyere ya ohere iji gosiputa talent ya. Oge na-egosi oge mgbe otu egwuregwu na-egwu megide ìgwè ndị ntorobịa Stuttgart.
"Ụlọ ọgbakọ ahụ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eme egwuregwu na-amalite,"
Kimmich chetara ma gara n'ihu ...
"Mgbe mụ na òtù ndị ntorobịa stuttgart na-eme egwuregwu ahụ, echere m ihe mgbaru ọsọ atọ a megide ha ma merie 3-2."
Nke a abụghị n'ezie ụzọ ọjọọ iji chọpụta. Ozugbo egwuregwu ahụ gasịrị, ndị na-eme egwuregwu na Stuttgart malitere ịgba Kimmich dịka sharks n'ọsọ iji nweta akwụkwọ aka ya na Stuttgart na-eduga n'ụzọ. Mkpebi kachasị maka nne na nna Kimmich. Ha buru ụzọ gwa ya òkù ka ya na Stuttgart malite ọzụzụ. Ma na Ms. Berthold Kimmich, gbanwere obi ha mgbe onye nlekọta egwuregwu nke ndị na-eto eto gara nleta ha n'ụlọ ha iji mee ka ha kwenye.
Mgbe ọtụtụ afọ na-aga Stuttgart na-aga Stuttgart ugboro ugboro n'izu, Kimmich malitere ịmalite nzọụkwụ mbụ ya n'ụwa football mgbe a nabatara ya na ụlọ akwụkwọ Stuttgart dịka otu n'ime ndị 18 kwa afọ.
Kimmich, ya na enyi ya, bụ onye nke kachasị ọhụrụ n'ime ha VfB Stuttgart otu ntorobịa. N'ụlọ ahụ, e nyere ya ọrụ niile ọ bụla ma ọ dịghị eme mkpesa. AMgbe ọ na-eto eto, a maara ya mgbe nile na ọ bụ onye ikpeazụ ịhapụ ọzụzụ ọzụzụ, ihe àmà nke mkpebi siri ike na ọ ga-eme ya. Nke a na-ahụ ka ọ na-emewanyewanye ma na-akarị onye otu ya na ya. Otú ọ dị, Ọ dịghị anya Kimmich mepụtara otu akụkụ nke egwu maka ekele ya.
Joshua Kimmich Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Ntọala azụ na nnukwu ezumike
Oge dị mwute maka Kimmich mgbe onye na-eduzi ya na-ahapụ ụlọ ọrụ ahụ iji nweta ohere ka ukwuu.
Ọganihu ngwa ngwa nke Kimmich ya na ngosipụta ya dị iche iche maka ụlọ ọrụ ntorobịa ya hụrụ ya ka ọ na-ebugharị ngwa ngwa site n'aka onye ntorobịa na onye ọkpụkpọ. O di nwute, o nwere isi ihe ozo. Kimmich ahụla onwe ya dịka onye tozuru etozu na onye na-eto eto na-eto eto rịọrọ arịrịọ maka VfB Stuttgart akwa otu. Ihe ọ rịọrọ ya jụrụ ya ọtụtụ ihe mgbu. Dị ka onye nkụzi ya bụ Stuttgart si kwuo.
'I nweghị ike, ahụ gị adịghị ike,'
Onye nhazi ọhụrụ ahụ gwara ya, na-agbakwụnye na ọ dị afọ ọzọ mkpa ya na ìgwè ndị ntorobịa VfB Stuttgart. Kimmich chetara na mkpebi ahụ mere ka ọ daa mbà n'obi n'agbanyeghị na ọ na-agba mbọ ijide onwe ya.
Kama ịnọgide na-enwe obi ụtọ, nwa agbọghọ Kimmich chọtara nkasi obi. O wepụtara ike site n'ikpebi ịchọta ego ya n'ebe ọzọ. N'ụzọ dị mma, ọ dị nnọọ otú ahụ na onye ọchịagha ọ hụrụ n'anya mbụ bụ onye durura ya na Stuttgart kemgbe ebe ahụ kwagara RB Leipzig, ọ chọkwara ya n'ebe ahụ. Kimmich ozugbo recaled ...
"Echere m na m nwere ohere a ma aghaghị m iwe ya !!"
Na Leipzig, o so n'òtù ndị agha na-ebuso ndị agha ọgụ, bụ ndị àgwà ya na-agba bọl na-eche ihu n'ihu elu anọ.
Joshua Kimmich Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Okwu Pep
N'ihe banyere ọganihu ya n'oge ọ bụ nwata, Kimmich nwetara ohere iji sonyere Bayern na 2015 Guardiola ịhụ site na ya nyefee àgwà. Na akaụntụ nke nzukọ Pep, Kimmich kwuru ...
"M nọdụrụ ala n'otu ụlọ nzukọ na Bayern na-echere izute Pep Guardiola. Ihe niile m maara banyere Pep bụ ihe m hụrụ na TV. Enwere m ụjọ nke ukwuu, mana ka ọ na-abanye na ya, enwere m mmetụta ozugbo - ntụkwasị obi ahụ. Ozugbo m matara: Achọrọ m igwu egwu maka Bayern. Pep gwara m banyere ikem na adịghị ike m, nakwa otú ọ chọrọ inyere m aka ịghọ onye ọkpụkpọ kachasị mma site n'ịmụ ụdị egwuregwu dị iche iche. 'Achọrọ m gị n'òtù a,' ọ gwara m. Nke a bụ oge m ga-echezọ. Kemgbe ahụ, ọ ghọrọ m nna. "
Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Joshua Kimmich Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Ndụ mmekọrịta
Imeri nsogbu nke football site na ịmepụta ụdị ndụ si na pitch na-ewuli elu zuru ezu nke Kimmich. Mmekọrịta ya na Lina Meyer, nke dị n'okpuru ebe a, na-arụ ọrụ dị oké mkpa n'ime usoro nke iwuli ndụ obi ụtọ maka onwe ya.
A mụrụ Lia na Bad Bevensen, obodo dị na Uelzen district na Lower Saxony, Germany. Ọ mụtara iwu na mahadum. Kimmich zutere enyi ya nwanyị mara mma Lina Meyer mgbe ọ na-egwuri egwu maka RB Leipzig ebe ọ na-arụ ọrụ. Ha abụọ malitere ezigbo enyi ma mesịa bụrụ ndị hụrụ ya n'anya.
Kimmich si arụ ọrụ ụkwụ na mkpebi siri ike iji nweta ihe ịga nke ọma na-eme ka Lina mara mma mgbe niile. Site n'ile anya n'ile anya n'ebe ndi ozo no n'okpuru, ndi ozo ga-esi ike ikwenye na Lina Meyer di afo ato karia enyi ya nwoke.
N'ihi na ọ mara mma, Lina aghọwo ọkacha mmasị n'etiti ndị WAG.
Joshua Kimmich Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Ndụ Ezinụlọ
Ndị nne na nna Joshua Kimmich: N'okpuru ebe a, ndị nne na nna dị mpako Kimmich bụ Anja na Berthold na nwa ha nwoke na-enweta abalị n'abalị maka aha nke ndị na-eme egwuregwu na-ewu ewu na district nke Rottweil, obodo ha.
Nna nna Joshua Kimmich bụ Berthold na-egwu egwu German onye amateur football. Berthold bi ugbu a na nwunye ya Anja (nne Kimmich) na Bösingen dị nso na Rottweil, Southwest Germany. A na-ekwu na ọ bụ nna na-anapụta onwe ya "Okwu Pep" nye nwa ya nwoke, si otú ahụ na-eme ka ọ nwekwuo obi ike na ịnụ ọkụ n'obi. Nke a ka o mere ihe ijuanya nke ndị na-ekiri ihe dị ka a hụrụ n'okpuru ebe a.
Ma nne na nna ya, Anja Kimmich na-ahapụ nwa ya nwoke ọ bụla mgbe ọ bụla ọ na-aga maka ịgba chaa chaa. Ma nne na nwa njikọ dịka ọ dị na foto dị n'okpuru.
Anja okwu na Joshua na ekwentị ọtụtụ. Ọtụtụ n'ime ihe ndị a na-ekwu gbasara Anja na-enye ntụziaka nwa ya na ntụziaka nri. Ọ bụ ọrụ maka ịkpọ aha ya 'Joshua' bụ onye na-ejere Moses ozi site n'Agba Ochie nke Akwụkwọ Nsọ.
Nwanna Nwaanyị Joshua Kimmich: Mgbe ndị mụrụ ya nọ n'ebe dị anya n'ebe ọ nọ, Debora Joshua nwanne ya nwanyị nọkwuo nso. Debora bi na Munich na nwanne ya nwoke kwụrụ ụgwọ. Dị ka ọ dị na 2 afọ gara aga, Debora bụ nwa akwụkwọ na-amụ akwụkwọ na Munich. Ọ bụ ya mere nwanne ya nwoke ji chọọ ịga n'ihu na agụmakwụkwọ ya n'oge ụfọdụ na ọrụ ịgba chaa chaa ya.
Kimmich gụsịrị akwụkwọ na 1.7 ọkwa. Na mgbakwunye na football, Kimmich chọrọ ịmụ ihe, ọkachasị azụmahịa na-arụ ọrụ n'oge ụfọdụ na ọrụ ya. A maara Debora nwanne ya nwaanyị na ọ nwere ezigbo ntutu na-acha ogologo ntutu na otu anụ ahụ dị mma. Ọ na-anọchite anya nwanne ya nwoke mgbe niile.
OBI: Joshua Kimmich nwere nwanne na-amaghị nwoke aha ya bụ Walter, dịka ya bụ kpakpando na ezinụlọ ya. Na ìgwè "Ncha ", Walter bụ onye na-agụ egwú nke ọma.
Joshua Kimmich Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Eziokwu nke Onye
N'ịbụ ndị na-agba ọsọ site na football, ihe omume ntụrụndụ ọzọ ya bụ "Tenis". Ihe oriri ya kachasị mma bụ spaetzle ma ọ kpọrọ asịgbu.
Kimmich bụ onye na-eche echiche miri emi na onye nwere ọgụgụ isi nke hụrụ ịhụnanya inyere ndị ọzọ aka. O nwere ike ịhụ n'enweghị ajọ mbunobi, n'akụkụ abụọ, nke mere ya onye nwere ike idozi nsogbu.
Okposụkedi enye ekeme ndinam ukem odudu emi odude ke enye. Kimmich pụrụ inwe nnukwu mkpa ọ ga-abụ n'oge ụfọdụ, naanị ya ma pụọ ​​n'ihe ọ bụla. Nke a ka ọ na-eme iji weghachite ike ya ma nwee ngosipụta ọrụ. Ọ na-ele anya na football pitch dị ka ebe jupụtara na ohere.
Kimmich na-eji uche ya eme ihe ọ bụla ohere na pitch. Ọ nwere àgwà ọhụụ a nke nwere ike ịghọta ọdịnihu maka ọrụ ya. Mgbe ọ nọ na agụmakwụkwọ, ọ maara kpọmkwem ihe dị mkpa iji hụ onwe ya.
Joshua Kimmich Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Nwekọrịta na Philipp Lahm
Ọnọdụ ya na pitch, maka ma osisi ma mba, ejiriwo atụnyere na Bayern na Germany akụkọ banyere Philipp Lahm.
Ndị na-efe nwere ike na-ekwu na Kimmich nwere mmetụ ka ọ na-aga n'ihu karịa onye bu ya ụzọ. Kimmich ji ọgụgụ isi na-eme ihe mgbe ọ na-aga n'ihu na-egosi ya dịka onye nwere nkwenkwe karịa onye na-agbachitere ya.
N'agbanyeghi na Kimmich gbaliri izere onwe ya site na Lahm, o gosiputara obi ya "Gaa n'ụzọ ya" na ọrụ ya. Ọ dị mwute maka ya, ọ na-egosi na nhọta ga-agabiga ngwa ngwa n'ihi na ọ na-eme ihu ọma ya. Ugbu a bụ ihe atụ ndị ọzọ;
Kimmich nwere ihe mgbaru ọsọ asaa na mgbasa ozi 71 Bundesliga maka Bayern ka Lahm weere 12 na 332.
O nwekwara ihe mgbaru ọsọ atọ maka Germany na 25 anya site na May 2016, ebe Lahm jisiri ike na ise 113, gbasaa 11 afọ.
Nchịkọta dị mfe bụ na Kimmich abụghị a Lahm Ma a Lahm-Müller ngwakọ. Ọ bụ n'ezie a "Ezigbo onye agha Switzerland nke onye ọkpụkpọ".
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Jọshụa Kimmich Childhood Story na ihe ndị ọzọ na-emeghị eme. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Egwuregwu nke Bayern Munich
Ụdị egwuregwu German
Akwụkwọ akụkọ RB Leipzig
Yussuf Poulsen Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Ethan Ampadu Child Story Story nke na-emeghi ihe omuma
Serge Gnabry Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Leon Goretzka Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Niklas Sule Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Ulo oru Europe342
James Rodriguez Nwatakịrị Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu
Joachim Lower Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Nwere ike 8, 2018
Ụmụaka Toni Kroos Akụkọ nke Na-emeghe Eziokwu